Apple TV famerenana: -taranaka fahefatra mivantana boaty tsy tanteraka mofo - News Fitsipika
Apple TV famerenana: -taranaka fahefatra mivantana boaty tsy tanteraka mofo
Ny Apple TV dia tsy tena mofo. Ny lahatsary faritra tsara indrindra, fa ny misy afa-po dia tery ao amin'ny UK. Ny mozika fampiharana no mahantra, ny lavitra rindrambaiko tsy miasa sy ny hafa fotsiny potika tsy vonona.
Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Apple TV famerenana: -taranaka fahefatra mivantana boaty tsy tanteraka mofo” nosoratan'i Samuel Gibbs, fa theguardian.com tamin'ny Talata 24 Novambra 2015 07.00 UTC
Ny vaovao Apple TV mampanantena fa revolutionize ny fahitalavitra-fijerena traikefa amin'ny fampiharana, iTunes sy Siri, mahatsapa fa be dia be toy ny antsasaky ny mofo-taranaka voalohany vokatra, Tsy fahefatra-taranaka iray.
Ny vaovao Apple TV dia kely, malamalama boaty mainty izay mipetraka eo ambany ny TV. Tsy tena toy ny kely na ny teo aloha Apple TV, toy izany ny fahatelo lava, saingy ny mitovy habe toy ny hafa rehetra-haino aman-jery mivantana boaty misy.
Ny fametrahana azy dia tena tsotra. Plug tamin'ny herin'ny tariby sy hahazatra azy ny TV mampiasa tariby ny HDMI. Ny iray dia tsy nanome ao amin'ny boaty, tsy dia ethernet tariby.
Mampalahelo fa, na dia hividy izany avy amin'ny Apple Store, ny Apple TV tsy tonga mialoha voaendrika amin'ny Apple ID. Amazon manao izany miaraka amin'ny afo sy ny Apple TV tokony koa.
Manana safidy roa ny nanangana ny rindrambaiko. Azonao atao ny mampiasa ny iPad na iPhone ho setup ny Wi-Fi sy iTunes kaonty, na tanana hiditra ny tsipiriany ny lavitra.
Remote-monina setup dia mivantana, fa niditra lahatsoratra dia mandreraka. Amin'ny alalan'ny fampiasana ny iPad ny setup stalled ny fotoana voalohany midika tsy maintsy manomboka manerana indray. Fa rehefa miasa fa haingana paompy fotsiny ny takelaka na finday avo lenta eo an-tampon'ny ny efajoro avy eo manaraka ny toromarika momba ny fitaovana. Dimy minitra ary nahavita ianao.
Rehefa setup atao, ianao amin'ny manokana. Tsy misy tutorial na fanampiana haingana ary misy tena be miafina ambadiky ny sehatra. Ohatra, avo roa heny nipaipaika ny "trano" bokotra, izay raha ny marina ny iray tamin'ny TV efijery kisary eo amboniny, mitondra anareo ho any amin'ny sakafo ny vao haingana nampiasa fampiharana mba hahafahanao Ampifamadiho ny mihazakazaka eo amin'ny fampiharana. Tena inoana tonga ianao mba hanandrana azy; Nataoko izany tsy nahy ny voalohany.
Ny ambony anisan'ny lavitra dia mikasika pad, ary miasa toy ny bokotra lehibe rehefa nitorikisina. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Processor: lafiny roa-fototra A8
Storage: 32 na 64GB
feo: Dolby Digital 7.1
fifandraisana: 10/100 ethernet, HDMI 1.4, USB-C, Wi-Fi As, Bluetooth 4.0
Ny Siri Remote no vaovao. Izany dia tao an-tampon'ny touchpad izay miasa toy ny bokotra goavana. Ary ny sisa amin'ny mitokana manana sakafo, an-trano sy Siri bokotra, boky fanaraha-maso sy ny fiatoana / lalao bokotra.
Mampianiana izany ianao miaraka amin'ny helatra tariby fa ny hery adaptatera tsy tafiditra. Tsy ampy ho voampanga amin'ny Apple TV saingy tsy misy hazavana, na inona na inona eo amin'ny mitokana mba hoe rehefa mamaly ny.
Tsy mifandray amin'ny Apple TV alalan'ny Bluetooth sy manana IR blaster ho an'ny mifehy ny boky amin'ny TV na AMP, izay tokony ho azy fotsiny miasa, raha tsy manana fandaharam-potoana izany ny tanana toy ny nataoko niaraka tamin'ny Sony AMP.
Swiping, swiping ary more swiping
Mba hitety ny interface tsara, swipe, Fidio ny fampiharana sy tsindrio ny mikasika pad nidina ho any afo izany, na misafidy afa-po avy amin'ny ambony talantalana. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Swiping amin'ny touchpad dia tsy mahomby noho ny fampiasana ny directional pad. Quick swipes horonam-boky kely foana ny, dia afaka tap lafiny iray na iray hafa mba hifindra dingana iray sisa, marina, miakatra na midina ka handroso nidina hifidy. Maniry foana aho afaka fotsiny aho mifanety ka hanao bokotra ho an'ny scrolling amin'ny alalan'ny lisitra lava.
Ny interface tsara no inertia naorina-in. Move ny fanondrony amin'ny touchpad sy ny sarimihetsika sary manosika manodidina kely toy ny hoe ny kitondro dia miraikitra eo anoloan'ny selector zips ho any amin'ny manaraka sarimihetsika miaraka. Tena manintona maso fa tsy nahita dia tsy ho mora kokoa ve raha mampiasa - raha ny marina, izany marina haingana nanakana voafantina.
Mihazona ny Siri bokotra mba hanomboka ny feony fanaraha-maso. Afaka hanomboka fampiharana, manontany fanontaniana tsotra - toy ny: "Ohatran'ny ahoana ny andro ao?"- Sy ny fikarohana ny filma sy ny fandaharana ao amin'ny tele, fa tsy aoka mitady mozika, na zavatra hafa.
Ny mahira-tsaina kely dia ny fahalavoan'ny fikarohana ho karazana. Ohatra, mikapoka ny bokotra sy ny hoe: "Archer" mitondra ny vanim-potoana rehetra Archer avy amin'ny iTunes fivarotana sy Netflix ao amin'ny UK (tolotra bebe kokoa ao amin'ny US). Tena tsotra sady miasa tsara.
More mandroso ny fikarohana toy ny hoe "Pierce Brosnan sarimihetsika" arahin'ny "ihany ny tsara fanahy" dia mampiseho ny halalin 'ny feo fanaraha-maso. Tsy miasa tsara.
Tanana variana afa-po dia be ary tsy afa-po miadana.
Apple miampy fahatelo-antoko
-Tampon'ny-talantalana mampiseho afa-po avy amin'ny voafantina fampiharana, amin'ity tranga ity amin'ny iTunes sarimihetsika, fa toy ny Netflix Apps afaka maneho ny vao haingana nijery tantara. Sary: Paoma
Content amin'ny Apple TV dia zaraina ho ankapobeny ny zavatra omen'ny Apple sy ny antoko fahatelo-zavatra. Ao amin'ny toby Apple dia ny fidirana ho amin'ny iTunes miandry ny filma sy fandaharana ao amin'ny tele, Apple Music na ny iCloud Music famakiam-boky, iCloud Sary sy ny App Store.
Tena mazava tsara rehefa manomboka mampiasa ny tolotra Apple fa maro amin'izy ireo no mbola tsy vita. Ireo izay Apple no nandany fotoana sy ny saina amin'ny - ny filma sy fandaharana ao amin'ny tele avy amin'ny iTunes fivarotana - tena tsara. Siri miasa tsara, fa slick ary raha ianao plugged ho Apple ny tontolo iainana, izany mahafinaritra.
Fa ny Apple TV fampiharana ny mozika no tena fototra fa mahakivy ny mampiasa. Izany mahatsapa toy ny zavatra avy amin'ny 2006, scrolling amin'ny alalan'ny lisitra goavana, swiping ny sy ny tsy misy fomba haingana dinganina na fikarohana. Siri milaza fotsiny tsy misaotra. Manana lehibe famakiam-boky mozika ao iTunes Match ary nandray ahy, ara-bakiteny, tokony ho dimy minitra mba horonan-taratasy, AC / DC ho ZZ Top.
Rehefa nahazo ny tsara mpanakanto, Album safidy tsara, fa minia lalan'ny dia mafy. Select, horonan-taratasy, mifidy indray. Tsy misy bokotra iray na fihetsika mba mankanesa any amin'ny manaraka lalana. Izany dia midika hoe hitatra, satria afaka hilalao mozika eo aoriana rehefa manao zavatra hafa. Afaka hiato kely sy milalao, fa raha te-hanova ny lalana Tsy maintsy mihady ny lalana rehetra hiverina any amin'ny mozika App.
Ny zavatra lehibe iray ny Apple TV no mandeha fa ny latsa-paka developer iOS fiaraha-monina. Other boaty, toy ny Fire Amazon TV, manan-Apps fa tsy misy hafa fa manana ny antsapaka ny Apple TV no ho an'ny mpandraharaha mba hamoronana bespoke fampiharana azy io.
Apps miainga amin'ny YouTube sy Ankehitriny TV ny Netflix - izay mampiditra amin'ny Siri fikarohana - amin'ny lisitry ny fampiharana, Weather fampiharana, fampiharana ny miasa avy sy ny fampiharana ho an'ny trano fandraisam-bahiny Bookings. Ny BBC iPlayer dia tsy misy mbola. Tsy misy ITV Player, Rehetra 4, Google Play na Amazon Prime Video.
Ny lisitry ny fampiharana ihany no mety hampitombo, ary raha tsy mety hiafara te-miantsena amin'ny TV, fa fotsiny ny tendron'ny ravin-vaingan-dranomandry raha ny iOS App Store dia misy famantarana.
Ny Apple TV dia ny ho mahery vaika toy ny iPad Air 2 ary toy izany koa manohana lalao amin'ny mitovy fari-tsary ny toetra. Apple miantso azy ireo hoe "hampionona toetra"; ny sasany toy ny Vondron-kintana ao amin'ny Fire, mijery tsara. Ny hafa indray dia tsotra cutesy lalao.
Fifehezana azy dia mampiasa ny lavitra na ny Wii-toy ny traikefa, swinging ny mitokana manodidina toy ny baolina ramanavy ohatra, na ny swiping sy ny kiti raharaha. Hitako tsy tena mahafa-po, te notokanana, manaiky bokotra for Arcade lalao ary mitombo haingana reraka ny sarimihetsika lalao.
Afaka mifandray fahatelo-antoko mpanara-maso mba hampiakatra azy ho vonjimaika hampionona, fa tsy lalao rehetra manohana izany. Ny zavatra hafahafa dia afaka mampifandray hatramin'ny telo mpitandrina sy ny lavitra, fa tsy mihoatra ny iray lavitra, izay mahatonga Wii Tennis analogies avy ny fanontaniana. Roa-mpilalao ny lalao toy ny Crossy Road, izay ahafahanao mampiasa ny iPad na iPhone ho toy ny faharoa-maso, dia mahagaga mahay fety.
Lalao matetika misintona haingana, fa tsy nahita ny sasany foana-tsipiriany ny lalao mafy maintsy misintona zavatra. Alohan'ny manomboka ny fampiharana, indray rehefa miezaka ny hanova ambaratonga. Izany haingana nahazo mandreraka.
Ny helatra seranan-tsambo eo ambany ny mitokana miasa akory va iPhone 5 na vaovao dovia, fa misy iray ao amin'ny boaty. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Other fandinihana FAMINTINANA
Afaka mampifandray ny napetraka ny Bluetooth écouteur mivantana any amin'ny Apple TV ho an'ny tsy miankina fihainoana.
Ny screensavers - manidina-ny lahatsary ny tanàna sy ny endriky ny manerana izao tontolo izao, avy any London ho any Hawaii - dia tena mesmerizing.
"Ahena mafy Sounds" isan-karazany ahafahan'ny mahery famatrarana, izay ambaratonga ny boky samy hafa ny feo mafy sy milamina ary mahatonga alina mihaino tsara kokoa noho ny mpiara-monina.
Ny seranan-tsambo ethernet mananika ny avy amin'ny 100mbps. Connect alalan'ny Wi-Fi ho an'ny be haingana kokoa haingana.
Siri dia natao hahafantatra ny toerana misy sy ny tiany, fa nisisika amin'ny fanomezana ahy ny Weather in Fahrenheit tsy Celsius ho an'ny herinandro voalohany ny fampiasana izany.
Ny mitokana Tsy intuitive. Vahiny tsy afaka mahatakatra izany mandra-Nohazavaiko fa ny mikasika pad sy ianao tsy maintsy handroso paompy izany.
Ny sakafo ny bokotra dia miverina miasa ny bokotra sy ny tahaka izao amin'ny Android na Windows Phone. Ny an-trano ny bokotra no iray amin'ny TV lamba famantarana eo amboniny.
Ny fampiharana Remote Apple tsy miasa miaraka amin'ny Apple TV vaovao.
Music no avoakany amin'ny 5.1 Nanodidina feo, tsy hoe Stereo, Raha manana Nanodidina fanamafisam-peo.
Ny tanana andilany ny mitokana tsy ampy, izay dia mila raha manan-janaka sy ny mihetsika lalao.
Tsy misy 4K fanohanana, izay tsy olana izao, fa mety ho amin 'ny manaraka roa taona.
Afaka kirihitra amin'ny alalan'ny lahatsary, na mozika amin'ny alalan'ny mifindra ny fanondrony amin'ny lavitra.
Ka nanao hoe: "inona no nolazainy" ho Siri dia dinganina indray 10 segondra ka nataony tamin'ny dikanteny ho an'ny lahatsary.
Ny fahefatra-taranaka Apple TV vidin'ny £ 129 amin'ny 32GB ny fitehirizana sy ny £ 169 for 64GB ny fitehirizana.
Fa raha oharina, ny Amazon Fire TV amin'ny 4K ny vidin'ny £ 80 ny Roku 3 vidin'ny £ 100 sy ny Google Chromecast £ 30.
Ny Apple TV dia tsy tena mofo. Ny lahatsary faritra tsara indrindra, fa ny misy afa-po dia tery ao amin'ny UK. Ny mozika fampiharana no mahantra, ny lavitra rindrambaiko tsy miasa sy ny hafa fotsiny potika tsy vonona. Rehefa niandry ny tsara indrindra ny telo taona mba handefa vaovao Apple TV, Nahoana no tsy vita?
Ny mitokana Toy marmite, ny olona ho tia azy na mankahala azy, na, ary raha mijery ny interface tsara fancy, ny fahitana dia mahantra sy tsy mampiditra na inona na inona tena vaovao.
Ny App Store dia mety ho ny Apple TV ny mpamonjy. Na ny asa mivantana ho hita Mbola ho hita. Amazon Praiminisitra Video toa inoana, Na dia afaka hampiasa mivantana ny hafa ny AirPlay avy amin'ny iPad ohatra.
Ny Apple TV manana ny mety ho tena tsara, ary ny ankamaroan 'ny olana mety ahitsy amin'ny alalan'ny rindrambaiko fanavaozam-baovao, fa amin'izao fotoana izao izany ny asa amin'ny fandrosoana izay tsy ho tsara toy ny mora lavitra mpifaninana.
Mahatsara: herin 'ny App Store, ny fidirana amin'ny iTunes sy Apple Music, tsara feo fanaraha-maso, IR fanaraha-maso ny boky, mihetsika lalao
Maharatsy ny mifampiresaka: tapany-mofo, mozika App mahantra, Siri tsy afaka mikaroka ihany mozika sy iTunes sy Netflix, UK ny ankamaroan'ny asa nirohotra tsy hita, tsy HDMI tariby, tsy lavitra dovia
Dimy tsara indrindra-haino aman-jery mivantana vata, mba hiala ny moana TV ho manan-tsaina iray
Google Chromecast famerenana: haingana sy mora ny fomba hanaovana ny TV manan-tsaina
Paoma, Apple TV, Apps, Article, Gadgets, IOS, Famerenana, Samuel Gibbs, Teknolojia, televiziona
← Paoma, Google sy Microsoft: mampiraviravy encryption mamela ny ratsy ry zalahy ao amin'ny Beeline bisikileta Fikarohana fitaovana famerenana: adin-tsaina-maimaim-poana ho an'ny mpikaroka tany vaovao mahafinaritra →